Inhloko zeNdaba Ntulikazi 23, 2019
********** Izakhamizi zakoBulawayo zithi azifuni ukuthi idolobho leli liqondiswe umsebenzi yikomishini ezabiphethe isikhundla samakhansila kulungiselelwa olunye ukhetho. Kunjalo nje umabhalani omkhulu wakoBulawayo, uTown Clerk, umnumzana Christopher Dube usekhweze emthethwandaba udaba lokuxotshwa kwakhe umsebenzi, ngumsekeli kaMeya.
********** Abenhlanganiso yabodokotela eye Zimbabwe Medical Association bakhuthaza abe Premier Medical Aid Association ukuba bahlawule odokotela kanye lokuthi balandele okwavunyelanwa phansi kwenhlanganiso ye Association of Healthcare Funders of Zimbabwe ukuba kube yizo imali ezihlawulelwayo.
****** Sekuqhamuke ukungezwani phakathi kwabatshayeli bezimota ezithwala uzulu, bakweleBotswana labe Zimbabwe edolobheni leFrancistown, kubangwa ibhizimusi.
************ Izizalwane zeZimbabwe kweleSouth Africa zikhuthaza ikomishini elwisa inkohlakalo iZimbabwe Anti-Corruption Commission (ZACC), ukuthi isebenze ngokungesabi lokungakhethi njengekomishini ecubungula izenzo zenkohlakalo kweleSouth Africa.
********** KuLiveTalk namhlanje kuhlelo ‘Diaspora Forum’ sikhangela udaba lwezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni ezikhuthazwa ukuthi zizetshala imali ekhaya kodwa ngasikhathi sinye zithwala nzima lapho zifuna ukuthola amapassport. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani imlayezelo kunombolo ezithi 0012024650318. Lingakhuthwa yilezindaba lezinye kuStudio 7 ngo half past 7 ntambama lango half past 6 ekuseni, kumagagasi athi 909 am, 4930, 15580 laku 6080 kilohertz kuShortwave.